Laascaanood: Somaliland oo laga codsadey in ay xabsiyada ka siidaayaan caruurta iyo haweenka • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Somaliland / Laascaanood: Somaliland oo laga codsadey in ay xabsiyada ka siidaayaan caruurta iyo haweenka
Laascaanood: Somaliland oo laga codsadey in ay xabsiyada ka siidaayaan caruurta iyo haweenka
May 29, 2018 - By: Keyse Aadan
Maalintii shalay ee Isniinta waxaa ka dhacay Laascaanood mudaaharaad ballaaran oo looga soo horjeedo joogitaanka Somaliland ee gobolka Sool gaar ahaan Laascaanood.
Taliyaha qaybta Booliska ee Laascaanood Col. Cabdirisaaq Maxamed Faarax oo saxaafadda la hadley ayaa sheegay in Mudaaharaadkaas ay kala eryeen oo magaaladu amni tahay, isla markaana ay xidheen qaar kamid ah dadkii ka qayb-qaadanaayey. Taliyaha oo aan ka warwareegin dadka xabsiyada lagu xidhay nooca ay yihiin ayaa sheegay in ay xidheen 57 caruur iyo haween isugu jira.. Taliyaha ayaa sidoo kale sheegay in ay xidheen laba suxufi qaar kalena ay ku raad joogaan. Weriyaasha xiran ayaa magacyadoodu kala yihiin.
Cabdiraxmaan Keyse Tungub
Maxamed Axmed Bidhaanshe
Taliyaha Booliska Laascaanood ayaa ku eedeeyey qolo aanu sheegin in ay caruurta iyo dumarka soo lugooyeen, laakiin wuxuu ugu baaqey kuwa soo lugooyey in ay iyagu soo baxaan oo sheegaan waxay doonayaan.
Saldhigga Booliskaa ee Laascaanood ayaa maanta waxaa buux dhaafiyey ehelada haweenka iyo caruurta la xidhay, waxaana ay Somaliland ka dalbadeen in ay xabsiyada ka siidayaan dadka biri mageydada ah ee muujinaayey fikirkooda xorta ah.
Puntland ayaa ku eedeysey Somaliland in ay Laascaanood keeneen ciidamo dheeraad ah oo Boolis iyo Milteri isugu jira kuwaas oo loogu tala galay in ay shacabka cabudhiyaan.
Wararku waxay sheegayaan in Maalintii shalay gawaarida Basaska lagu keenay dhalinyaro laga soo ururshey Burco ilaa Oog kuwaas oo loogu tala galay in ay Laascaanood ka dhigaan Mudaaharaad lagu taageerayo Somaliland si caalamka loo marin habaabiyo arrintaas oo shacabka Laascaanood ka gil-gisheen waxaana ay dhalisey mudaaharaadkii rabshadaha watey.
Qaar kamid ah Suxufiyiinta madaxa banaan ee Laascaanood ayaa ku jira dhuumasho, waxaana baadi goobaya ciidanka Somaliland si ay u xidhaan.
Mudaaharaadkii shalay waxaa ku dhaawacmey 8 qof ugu yaraan kuwaas oo qaba dhaawacyada rasaasta iyo jirdil kale.
Maalinba maalinta kadanbeysa waxaa faraha ka sii baxaya xaaladda Laascaanood oo ah xarunta gobolka Sool oo Somaliland Puntland ka qabsatey 10/2007.
Tan iyo markii ay dagaaladu ka qarxeen gobolka Sool ayaa in badan oo kamid ah shacabka Laascaanood waxay muujiyeen sida ay uga xun yihiin ciidamada Somaliland ku soo daabushey gobolka iyo cabduhinta lagu hayo xoriyadoodi.